Pamhepo Turbidity Meter T4070
Yakadzikama data, yakavimbika mashandiro; yakavakirwa-mukati mekuzviongorora-basa kuti uve nechokwadi chechokwadi kuisirwa kuri nyore uye calibration.
Pamhepo Turbidity Meter T6070
Pamhepo Yakasimudzwa Solid Meter T4075
Nheyo yeiyo sludge yevasungwa sensor inoenderana neyakaunganidzwa infrared yekumwa uye akapararira mwenje nzira. Iyo ISO7027 nzira inogona kushandiswa kuenderera uye nekunyatso kuona iyo sludge kusangana.
Sekureva kweIO7027 infrared kaviri-yekuparadzira mwenje tekinoroji haina kukanganiswa ne chromaticity kuona iyo sludge yevasungwa kukosha. Basa rekuzvichenesa rinogona kusarudzwa zvinoenderana nenzvimbo yekushandisa. Yakadzikama data, yakavimbika mashandiro; yakavakirwa-mukati mekuzviongorora-basa kuti uve nechokwadi chechokwadi kuisirwa kuri nyore uye calibration.
Pamhepo Yakasimudzwa Solid Meter T6075
Nheyo yeiyo sludge yevasungwa sensor inoenderana
iyo yakasanganiswa infrared absorption uye yakapararira mwenje nzira. Iyo ISO7027 nzira inogona kushandiswa kuenderera uye nekunyatso kuona iyo sludge kusangana.
Pamhepo Yakasimudzwa Solid Meter T6575
Titanium Alloy Kuitisa Shungu, Kufambisa TDS Sensor, Quadrupole Graphite Kuitisa Shungu, Electromagnetic Kuitisa Inzwa, Chlorophyll Sensor, Ph Sensor Electrode,